လေလံ: Christie's South Kensington ရတနာ | HIGH ရတနာအိပ်မက်
ဇန်နဝါရီလ 7, 2015
၂၀၁၅ နှင့်ယင်း၏တောက်ပသောသတင်းကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်မှာကျင်းပမယ့် Christie's South Kensington ရတနာလေလံပွဲကိုကျွန်တော်မစတင်နိုင်သေးပါဘူး။
အရောင်နှင့်ထင်ရှားသော volumetric ဒီဇိုင်းများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာလေလံပွဲတစ်ခု။ ဤတွင်သင်တို့အဘို့အ Christie ရဲ့ (နှင့်ငါ့) ပျေါလှငျဖြစ်ကြသည်။
De Grisogono မှ peridot နှင့်ပတ္တမြားပုတီးတစ်စုံ။
tapered bombéကွင်းတစ်ခုစီသည်ပျားလပို့ဒီဇိုင်း၊ post နှင့် clip fittings တို့၏ရှည်လျားသောပတ္တမြားပတ်ပတ်လည်တွင်ဖန်စီခတ်ထားသော peridot များတပ်ဆင်ထားသည်။ £ 2.8-1,300 ခန့်မှန်း။
လက်မှတ်ထိုး De Grisogono မရှိ။ B6515 ။
လတ်ဆတ်ပုံသဏ္roseာန်နှင်းဆီအနီတစ်ခုစီသည်စိန်ဖဲကြိုးအသေးစိတ်ကိုသုံးထားသောစိန်အလေးတစ်ထည်မှောက်။ စိန်ပွင့်နှစ်ပွင့်ရပ်ဆိုင်းမှု၊ post fittings၊ အရှည် ၉.၀ စင်တီမီတာ။ £ 9.0-2,000 ခန့်မှန်း။
David Webb ၏ကျောက်ဆောင်နှင့်စိန်လက်ကောက်။
အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဒီဇိုင်းတစ်ခုစီသည် tapered link တစ်ခုစီသည်မျက်နှာတစ်ဝက်တွင်ရှုထောင့်မှလဝက်ဝက်ပုံကျောက်ဆောင်ကျောက်ဆောင်နှင့်တစ်ဖက်တွင်အရှည် ၁၇.၀ စင်တီမီတာရှိသည်။
WEBB ©လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ £ 3,200-4,800 ခန့်မှန်း။
၁၈ ကာရက်ရှိရွှေဖြူ 'Happy Diamonds' ၏နေအိမ်ဆွဲကြိုးလည်ဆွဲလည်ဆွဲ၊ Chopard မှပြုလုပ်သည်။
အလယ်အလတ်အကဲဖြတ်ထားသောအခန်းအတွင်းရှိလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားတောက်ပသောစိန်ကော်လက်တိုများနှင့်အတူတောက်ပသောဖြတ်ထားသောစိန်ပွင့်အလှတပ်ဆင်ထားသည့်အတင့်တင့်တောက်ပသောအတုံးနှစ်ထပ်ဆွဲကြိုးကွင်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကွင်းဆက်၊ ဥရောပကွန်ဗင်းရှင်းအမှတ်အသားများ၊ အရှည် ၄.၁ စင်တီမီတာ၊ ကွင်းဆက် ၄၂.၀ အရှည်စင်တီမီတာ, ထုတ်လုပ်သူရဲ့အိတ်။
Pendant နှင့်ကွင်းဆက်များ Chopard ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ 79/6571 / 0-20 ။ £ 2,000-3,000 ခန့်မှန်း။
တစ် ဦး ကစိန်တစ်ခုတည်းသောကျောက်လက်စွပ်
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၇.၇၂ ကာရက်အလေးချိန်ရှိပြီးနှစ်ဆလက်သည်းလေးလုံးရှိစိန်တောက်ပြောင်နေသောစိန် £ 7.72-10,000 ခန့်မှန်းပါ။
Cartier မှစိန်တစ်ပွင့်နှင့်ကြွေထိုးထားသော 'Panthere' လင်းလက်ပတ်နာရီ။
အနက်ရောင်ကြွေအစက်အပြောက်များပါ ၀ င်သည့်စိန်တံဆိပ်ခတ်ထားသောအလှည့်ကျဇယားနှင့်အုတ်နံရံနှင့်အုတ်ချိတ်လက်ပတ်ကျောက်မျက်များ၊ နောက်ပြန်ကျောတပ်ဆင်ထားသောစိန်သရဖူ၊ screw ရှစ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့်ကျော၊ ၁၈ ကာရက်ရှိရွှေနှစ်ချပ်တပ်ဆင်ထားသည့်ရွှေချိတ်၊ ဥရောပကွန်ဗင်းရှင်းအမှတ်အသား၊ အကျယ် ၂၁.၀ မီလီမီတာ၊ ထုတ်လုပ်သူ ခရီးသွားအမှု။
Caseier နှင့် Clasp သည် Cartier နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ 8057915, 07710. ခန့်မှန်း£ 6,000-8,000 ။
Stephen Webster မှ ၁၈ ကာရက်ရှိရွှေဖြူကျောက်မျက်ရတနာ Crystal Haze ကွင်းနှစ်ကွင်း
တစ်ခုချင်းစီကိုအသားအရောင်ခွဲခြားထားသည့်ကျောက်သလင်းကျောက်ပြားတစ်ခု၊ မိခင်ပုလဲအပေါ်မှတစ်ခု၊ ပန်းရောင်ခိုင်ခံ့သောကျောက်တုံးများပေါ်တွင်တစ်ခုစီ၊ အပြောင်တောက်တောက်ဖြတ်ထားသောစိန်လိုင်းနယ်နမိတ်များ၊ လန်ဒန်၏အမှတ်အသားများ၊
တစ်ခုချင်းစီကို Stephen Webster အတွက်ထုတ်လုပ်သူ Mark အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ £ 1,500-2,500 ခန့်မှန်း။
သစ်တော်သီးပုံဖော်ထားသော kunzite တစ်ခုစီသည် baguette ဖြတ်ထားသောစိန်နှင့်တောက်ပသောဖြတ်တောက်နိုင်သည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုင်းဆိုင်းနားတွင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၁၈ ကာရက်ရွှေဖြူ၊ တပ်ဆင်ထားသည့်တိုင်၊ London hallmark၊ ၅.၃ စင်တီမီတာရှည်သည်။ £ 18-5.3 ခန့်မှန်း။
ကျောက်မျက်ပုတီးနှစ်စုံ၊ Bulgari မှတစ်ခု၊ De Grisogono မှတစ်ခု
ပထမစုံတွဲကိုစိန်ကွင်းအဖြစ်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဒီဇိုင်းဆင်ထားသည် - အမျိုးမျိုးသောနီလာနှင့်စိန်ပန်းပွင့်အစုအဝေး၊ clip fittings အရှည် ၄.၀ စင်တီမီတာ; ဒုတိယပန်းခြံသည်ခေါင်းလောင်းကဲ့သို့သောကာဗွန်ဖိုင်ဘာအကျောအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပန်းရောင် Sapphire အစွန်းနှင့် surmount၊ post နှင့် clip fittings အရှည် ၄.၅ စင်တီမီတာရှိသည်။
ပထမအတွဲသည် Bvlgari ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဒုတိယစုံတွဲမှာ De Grisogono ဖြစ်သည်။ B66938 ။ £ 960-1,000 ခန့်မှန်း။
တစ်ခုချင်းစီသည် ၅.၀ စင်တီမီတာအရှည်ရှိသောသစ်တော်သီးပုံသဏ္iာန် iolite အစက်အပြောက်များ၊ စာတိုက်နှင့်ကလစ်ပ်တာများကိုဆိုင်းငံ့ထားသောပန်းရောင်နီလာကြိုးကွင်းဆက်အတွင်းဘွဲ့လွန်တောက်ပသောစိန်ကွင်းအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ £ 5.0-1,300 ခန့်မှန်း။
တစ် ဦး ကရောင်စုံစိန်နှင့်စိန်လက်စွပ်
ကျောက်ပြားနှစ်ချပ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားသောဗဟိုနှလုံးအဝါရောင်စိန်ဖြင့်ကျောက်မျက်နှစ်ချောင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားသည့်ကျောက်မျက်ရတနာစိန်နှင့်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်အရောင်တစ်မျိုးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အရောင်စိန်များကိုသဘာဝအရောင်အတွက်မစမ်းသပ်ရသေး။ မူလ။ £ 1,300-1,600 ခန့်မှန်း။
Adler မှယဉ်ကျေးသောပုလဲ၊ ပတ္တမြားနှင့်စိန် torsade လည်ဆွဲ
အမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုပုလဲကြိုးများသည်စိန်ပွင့်နံရံများနှင့်အတူပတ္တမြားပုတီးစေ့များဖြင့်သွယ်ဝိုက်။ ၊ cabochon ပတ္တမြားတစ်စက်ကိုဘဲဥပုံ - သတ်မှတ်ထားသောစိန်ပတ်ပတ်လည်အတွင်းရှိဘဲဥပုံဖြတ်ထားသောစိန်ကော်လက်တစ်လုံး၊ ရှည်လျားသော 42.0cm surmount
Adler လက်မှတ်ထိုး £ 2,000-2,500 ခန့်မှန်းပါ။
Kutchinsky မှ ၁၈ ၁၈ တန်ရွှေ၊ စိန်နှင့်ကြွေလက်ကောက်
ခြယ်ထားသောအနီရောင်ခြင်္သေ့၏ခေါင်းအဖြစ်၊ အနက်ရောင်ကြွေအသံထွက်နှင့်အတူလည်ပင်း၊ စိမ်းလန်းသောကျောက်မျက်မျက်လုံး၊ အနက်ရောင်ကြွေခြင်းနှင့်တောက်ပသောဖြတ်စိန်တံတွေးဖြင့်လုပ်ထားခြင်း၊ ၎င်း၏ပါးစပ်ထဲတွင်တောက်ပသောဖြတ်တောက်ထားသောစိန်ကွင်းကိုဆုပ်ကိုင်ထားသည့်အနီရောင်ကြွေပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်ကောက်နှင့်အတူ စိန်ကော်လာ၊ အချင်း ၅.၄ စင်တီမီတာ၊
ထုတ်လုပ်သူရဲ့အမှတ်အသား Kld ။ £ 3,500-4,000 ခန့်မှန်း။
ပတ္တမြားမျက်လုံးများနှင့်အတူပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းရှိအချင်း ၅.၈ စင်တီမီတာရှိသောပေါင်းစပ်ထားသောအပြာရောင်ကြွေကြွေခန္ဓာကိုယ်ကိုပတ္တမြားမျက်လုံးဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြတ်သန်းထားသောစိန်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းရှိခေါက်ထားသည့်စိန်အဟောင်းဖြင့် ဦး ခေါင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ £ 5.8-10,000 ခန့်မှန်းပါ။
၁၈ ကာရက်ရွှေဖြူ၊ tanzanite နှင့်စိန်လက်စွပ်
Cushion ပုံစံတန်ဇန်းနိုက်သည်တောက်ပသောဖြတ်တောက်ထားသောစိန်တုံးအတွင်းရှိစွန်ပလွံထိုးဖြတ်ထားသောစိန်တစ်ခုတည်းသောကျောက်တုံးများဖြင့်လန်ဒန်၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ £ 1,000-1,400 ခန့်မှန်း။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၇.၇၃ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောဘဲဥပုံဖြတ်ထားသောနီလာသည်တောက်ပသောစိန်ပတ်လည်တွင်ရှိသည်။ £ 7.73-2,500 ခန့်မှန်း။
ယဉ်ကျေးမှုရှိသောပုလဲ၊ နီလာနှင့်စိန်လည်ဆွဲတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပုလဲမျိုးစုံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပုလဲများဖြင့်နီလာအနည်အနှစ်များပါသောအလယ်အလတ်စတုဂံပုံသဏ္ularာန်ပွင့်ပြားပေါ်ရှိရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြတ်ထားသောစိန်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိနီလာဖြင့်သစ်တော်သီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစိန်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိစိန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သစ်တော်သီးပုံသဏ္sapာန် Sapphire စင်တာများ၊ အရှည်မှာ ၄၀.၅ စင်တီမီတာရှိသည်။ £ 40.5-2,000 ခန့်မှန်းပါ။
Gubelin မှ abalone ပုလဲနှင့်ယဉ်ကျေးပုလဲလည်ဆွဲ၊ လက်စွပ်နှင့်နားကပ်အစုံ
၃၁.၀ စင်တီမီတာရှည်သောယဉ်ကျေးသောပုလဲများနှင့်အတူတက်ကြွသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဘိန်းဖြူပုလဲပြားခုနစ်လုံးဖြင့်ဘားတန်း ၇ ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်စွပ်နှင့်နားကပ် en suite, clip fittings နှင့်အတူပုတီး, အရှည် 43.0cm ။ £ 2.5-5,000 ခန့်မှန်း။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၁.၇ မီလီမီတာခန့်ရှိသောယဉ်ကျေး။ ပုလဲတစ်ခုစီသည်ထုတ်လုပ်သူအမှု၌အရှည် ၂.၀ စင်တီမီတာရှိသည်။
Larry ကိုလက်မှတ်ထိုးသည်။ £ 600-800 ခန့်မှန်း။
တစ် ဦး က Tourmaline နှင့်စိန်ဆွဲပြား
ဗဟိုပန်းပန်းပု Tourmaline သည်တောက်ပသောဖြတ်တောက်ထားသည့်စိန်တုံးနှင့် Baguette နှင့်ပုံသေသောစိန်ပွင့်သုံးကျောက်တုံးအစရှိသည်၊ တောက်ပသောဖြတ်တောက်ထားသောစိန်တစ်ခုတည်းသောကျောက်တုံးရပ်နားမှုနှင့် ၄.၀ စင်တီမီတာရှည်သောကျောက်တံတိုင်းသုံးခုပါရှိသည်။ £ 4.0-3,000 ခန့်မှန်း။
citrine, Tourmaline နှင့်စိန်ပုတီးတစ်စုံ
ရှုထောင့်ရှိ Cyline ပုံစံတစ်မျိုးစီသည်စတုဂံပုံစံဖြတ်ထားသောအစိမ်းရောင် Tourmaline မှ ၈.၁ စင်တီမီတာရှည်သောစိန် collet connector၊ ချိတ် fittings များသို့ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ £ 8.1-1,800 ခန့်မှန်း။
၃ လက်မအရွယ်ရှည်လျားသော ၃.၀ စင်တီမီတာရှည်သောစိန်ပွတ်တိုက်နှင့်အတူခြေသည်းလေးခုရှိအဝါရောင်နီလာနီလာအဖြစ် cushion ပုံစံအဝါရောင်နီလာအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပွင့်လင်းသောပခုံးများ၌ဘဲဥပုံရောနှောထားသောနီလာနှင့်အတူလက်သည်းကွင်း။ £ 3.0-2,500 ခန့်မှန်း။
ခြေသည်း၌ရှိသောပန်းထွင်းထည်စတုဂံစွယ်ကျောက်မြက်သည် ၄.၃ စင်တီမီတာရှည်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဖြတ်ထားသောစိန်သုံးကျောက်ဆွဲပြားကွင်းနှင့်သဲလွန်စကွင်းဆက်ကြိုးဆွဲကြိုးသို့စတုဂံမြကျောက်။ £ 4.3-5,000 ခန့်မှန်း။
Christie ရဲ့အပေါ်ပစ္စည်း က်ဘ်ဆိုက်.
Tags:လင်းယုန်ငှက် • လလေံပှဲ • Cartier • chopard • ခရစ်စမတ် • အရောင်များ • David Webb • de Grisogono • စိန်ပွင့် • ပျေါလှငျ • ရတနာ • Kutchinsky • Larry က • လန်ဒန် • ပုလဲ • ပုလဲ • ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှု • နီလာ • တောင်ပိုင်း Kensington • Stephan Webster • tanzanite • volumes ကို
မှတ်ချက်2ခုလေလံ - Christie's South Kensington ရတနာ"
Pingback: Scarselli Diamonds:2HS လက်စွပ် - Valentine's Day အထူး - GETREALLUXURY.COM
Pingback: ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ထာဝရခရီး - GETREALLUXURY.COM